Maro ny zavatra simba toy ny tetezana 2 tao Morafeno sy Ambonirina izay tapaka tanteraka ary tsy azo andehanana intsony. Nanambara ny ben’ny tanàna fa hanomboka amin’ity volana febroary ity ny asa. Hatao rarivato koa ny lalana eny Antsampanihamahazo Miandrarivo ary Ampitakao. Havaozina ihany koa ny CSB II ao Tsarahonenana sy Tsiafindrasoa ary Morarano Centre. Hisy koa ny fizarana karatany 400 isa, izay tena hatao mifanandrify amin’ny fahefa-mividin’ny olona. Raha 9 alina Ariary mantsy izany teo aloha dia lasa 4 alina Ariary ankehitriny. Hametraka miaramilan’ny DAS isaky ny fokontany ihany koa ny ben’ny tanàna, ka ny fokontany mafana sy hanjakan’ny asan-dahalo no hasiana, toy ny ao Andohafarihy, Soamanana ary ny fokontany Miandrarivo. Marihana fa voafidy fanintelony hitantana ny kaominina Miandrarivo ity ben’ny tanàna ity.